Abavelisi beChlorine abaseleyo-China Intsalela yeChlorine yefektri kunye nababoneleli
I-YLG-2058-01 Intsalela yechlorine yeNtloko yeShishini
I-Electrolyte kunye ne-osmotic membrane yahlula iseli kunye neesampulu zamanzi, inwebu evumayo inokukhetha ukungena kwi-ClO- ukungena; phakathi kwee-electrode ezimbini zinomahluko onokubakho, amandla okhoyo ngoku anokuguqulwa abe yintsalela yeklorine yoxinaniso.
I-CL-2059-01 ye-Intanethi eseleyo ye-Chlorine Sensor
I-CL-2059-01 yi-electrode yokulinganisa umgaqo wevolthi wamanzi omanzi, iklorine dioxide, iozone. Umlinganiso wevolthi rhoqo ugcina amandla ombane azinzileyo kwicala lomlinganiso we-elektrode, izinto ezahlukeneyo zivelisa amandla ahlukeneyo ngoku kumbane xa kulinganiswa.
I-YLG-2058 ye-Residual Chlorine Analyzer
I-YLG-2058 ye-Intanethi eseleyo kwi-Chlorine Analyzer yi-bran-analyzer entsha ye-chlorine analyzer kwinkampani yethu; Sisilumkiso esiphakamileyo sobukrelekrele kwi-intanethi, Senziwe ngamacandelo amathathu: isixhobo sesibini kunye noluvo, iselfowuni yokuhamba kweglasi. Inokulinganisa intsalela yeklorine, i-pH kunye nobushushu ngaxeshanye. Ingasetyenziselwa ngokubanzi ukubek'esweni ngokuqhubekayo kwe-chlorine eseleyo kunye nexabiso le-pH kumgangatho wamanzi ohlukeneyo kumandla, izityalo zamanzi, izibhedlele kunye namanye amashishini.
I-CLG-2059S / P kwi-Intanethi eseleyo kwiChlorine Analyzer
I-ClG-2059S / P intsalela ye-chlorine analyzer inokudibanisa ngokuthe ngqo i-chlorine eyintsalela kumatshini uphela, kwaye ngaphakathi iyigcine kwaye iyilawule kumlawuli; Inkqubo idibanisa umgangatho wamanzi kuhlalutyo lwe-Intanethi, ugcino lwedatha kunye nemisebenzi yokulinganiswa kwenye, kwaye yingqokelela yedatha yeChlorine kunye nohlalutyo lubonelela ngokulula.
1. Inkqubo emanyanisiweyo inokulinganisa intsalela yeklorini kunye nobushushu;
2. Ngomlawuli wokuqala, unokuvelisa i-RS485 kunye ne-4-20mA imiqondiso;
I-CL-2059A ye-Chlorine Analyzer eseleyo kwi-Intanethi
I-CL-2059A sisilinganiselo esitsha sokuhlaziya i-chlorine analyzer, enobukrelekrele obuphezulu, ubuntununtunu. Inokulinganisa intsalela yeklorini kunye nobushushu ngaxeshanye. Isetyenziswa ngokubanzi kumashishini anje ngesityalo samandla ashushu, amanzi abalekayo, amayeza, amanzi okusela, ukucoca amanzi, amanzi acocekileyo kwimizi-mveliso, ukubhukuda ukubulala iintsholongwane kwi-chlorine intsalela yokujonga.